Ministry of Federal Union Affairs - MOFUA | မိန့်ခွန်းများ
01 February 2022 မိန့်ခွန်းများ
ချစ်ခင်လေးစားရပါသော နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသား ပြည်သူအပေါင်းတို့ခင်ဗျား-ဒီနေ့ဆိုရင် အဓမ္မ စစ်ဝါဒီတွေက နိုင်ငံတော်အာဏာကို လုယူသိမ်းပိုက်ခဲ့တာ (၁) နှစ် တင်းတင်း ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လုံးလုံး အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီကို လုံးဝ အုပ်ချုပ်ခွင့်မပြု စတမ်းဆိုတဲ့ သံဓိဌာန်နဲ့ နည်းလမ်းမျိုးစုံသုံးပြီး ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ခဲ့ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများကို နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ အထူးလေးစား ဂုဏ်ပြုပါကြောင်း ဦးစွာ ပထမ ပြောကြားလိုပါတယ်။ လမ်းမတွေပေါ်မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြရင်း ကျဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေ၊ စစ်ကောင်စီရဲ့ စစ်ကြောရေး စခန်းနဲ့ အကျဥ်းထောင်တွေအတွင်း ကျဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေ၊ တော်လှန်ရေး စစ်မြေပြင်မှာ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ရဲဘော်တွေနဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သူတွေ အားလုံးဟာ ပြည်သူ့ သူရဲကောင်းတွေပါပဲ။ ပြည်သူက အမြဲတမ်း သတိတရရှိနေမှာဖြစ်သလို၊ တချိန်မှာ နိုင်ငံတော်က ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဂုဏ်ပြုရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဓမ္မအာဏာသိမ်းမှု တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ ဒီနေ့မှာ အမျိုးသားညီညွတ် ရေးအစိုးရ ယာယီသမ္မတအနေနဲ့ ပြည်သူ့သူရဲကောင်းအပေါင်းကို ဂုဏ်ပြု ဦးညွတ်လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာစစ်အာဏာရှင်စနစ် ဘယ်လောက်ဆိုးယုတ်သလဲဆိုတာ မြန်မာပြည်သူတွေ အသိဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၂၁ခုနှစ် အတွင်း လေးကြိမ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် နိုင်ငံဟာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ နဲ့ကျန်းမာရေး အဆင့်အတန်း အဖက်ဖက်က နိမ့်ကျပြီး ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲဆုံး (LDC) နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ဂုဏ်သိက္ခာ ညိုးငယ်ကျဆင်းခဲ့ရတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ အဓိကနိုင်ငံရေးပြဿနာဟာ ဘာလဲ၊စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို တည်ဆောက် ခြင်း မပြုနိုင်တဲ့ အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖက်ဒရယ်ကျင့်သုံးဖို့ ငြင်းပယ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီမိုကရေစီကို ငြင်းပယ်ခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူတစ်ဦးချင်းရဲ့ လွတ်လပ်မှု၊ လူ့အခွင့်အရေးများ ဆိတ်သုဥ်းခဲ့ရတယ်။ ဖက်ဒရယ်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းကြောင့် တိုင်းရင်းသားများ လိုလားတဲ့ တန်းတူရေး နဲ့ တရားမျှတမှု အခွင့်အလမ်းများ ဆိတ်သုဥ်းခဲ့ရတယ်။ စစ်အုပ်စုနားလည်တာက နိုင်ငံရေးမှာ စစ်တပ်က အစဥ်အဆက် ဗိုလ်ကျစိုးမိုးရေးနဲ့ လူမျိုးကြီးဝါဒပဲ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေးအာဏာကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ချုပ်ကိုင်လွမ်းမိုးထားပြီးတဲ့နောက် စစ်တပ်ဟာ သီးသန့် လူတန်းစားတစ်ခုဖြစ်လာ တယ်။ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အခွင့်ထူးခံ အုပ်စုတစ်ခု ဖြစ်လာတယ်။ သူတို့ ကြံစည်လုပ်ဆောင် သမျှ စစ်အုပ်စုဗဟိုပြုရေး ဖြစ်လာတယ်။ စစ်တပ်အကျိုးစီးပွါး အဓိက ဝါဒ ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ သူတို့ဝါဒက ပြည်သူဟာ စစ်တပ်ကို အစဥ်အမြဲ ကျိုးနွံနေရမယ်၊ ပြည်သူဟာ စစ်တပ်ပြု သမျှ နုရမယ် ဆိုတဲ့ ဝါဒပဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့် စစ်တပ်က ပြည်သူကို ကျွန်ဇာတ်သွင်းတဲ့ ဝါဒပဲ၊ စစ်ကျွန်ဘဝမှာ တိုင်းရင်သားပြည်သူတစ်ရပ်လုံး လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်။ စစ်အုပ်စုဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သုံးဖို့ ငြင်းပယ်ခြင်းအားဖြင့် ပြည်တွင်းစစ်ကို မီးမွှေးပေးခဲ့တယ်။ အနှစ်(၇၀) ကျော် ပြည်တွင်းစစ်သည်ပင်လျှင် စစ်အုပ်စုရဲ့ အကျိုးစီးပွါး ဖြစ်လာ တယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ကို အကြောင်းပြုပြီး ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ အချုပ်အချာအာဏာ မဆုံးရှုံး ရေး ကြွေးကြော်သံများနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် အာဏာသိမ်းခဲ့တာလည်း ဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က ဗိုလ်ကျစိုးမိုးနေသမျှ၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ လူမျိုးကြီးဝါဒ သက်ဆိုးရှည်နေသမျှ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ တည်ငြိမ်မှုနဲ့ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု အခွင့်အလမ်းများ လက်လွတ် ဆုံးရှုံးနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြုံကြည့်ရင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြဿနာအားလုံးရဲ့ အဓိကအကြောင်း၊ အဓိက လက်သည်တရားခံဟာ စစ်အုပ်စုဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့မြင် နိုင်ပါတယ်။ လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှုနဲ့ တန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့ လောကပါလတရားများ ထွန်းကား ပြီး လူမှုစီးပွါး ဖွံဖြိုးတိုးတက်တဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီနိုင်ငံသစ်ကို ထူထောင်လိုတယ်ဆိုရင် စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို အမြစ်ပြတ် တွန်းလှန် ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကလွဲလို့ တခြားဖြေရှင်းနည်းမရှိဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့ ရှုမြင်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် အာဏာသိမ်းမှုကတော့ သမိုင်းတစ်လျောက် အဆိုးယုတ်ဆုံး စစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူကရွေးကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့ တရားဝင်အစိုးရဆီက အဓမ္မ အာဏာသိမ်းယူခဲ့ခြင်းဟာ နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု ကျုးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သလို၊ စစ်အာဏာသိမ်းမှု ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ လူငယ်တွေ၊ ပြည်သူတွေကို လူမဆန်တဲ့နည်းမျိုးစုံနဲ့ အကြမ်းဖက် ဖိနှိပ်သတ်ဖြတ် နေခြင်းဟာ စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ကျူးလွန်နေခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြပွဲများနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ပြည်သူ ၁၅၀၀ ခန့် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီး ပြည်သူ ၁သောင်းနှစ်ထောင်ခန့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတယ်။ ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ကို ရင်ဆိုင် နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါ အရပ်သား ကျေးရွာပေါင်းများစွာနှင့် ချင်းပြည်နယ် ထန်တလန်မြို့နှင့် ကရင်နီပြည်နယ်မှ မြို့အချို့ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီး၊ စစ်နဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ ပြည်သူ ၁၀၀၀ ကျော်ကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ ဒီသတ်ဖြတ်မှုတွေထဲမှာ ဒီဇင်ဘာလ (၇)ရက်က ဆားလင်းကြီး မြို့နယ်၊ ဒုံးတောရွာဖြစ်စဥ်မှာ ပြည်သူ(၁၁)ဦး၊ ခရစ္စမတ်ရက်က ကရင်နီ ပြည်နယ်၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ မိုဆို ရွာဖြစ်စဥ်မှာ ပြည်သူ ၃၅ ဦးကျော် အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ဖြတ်တဲ့ ဖြစ်စဥ်တွေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီရဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်ဗျူဟာကို တစ်နှစ်လုံးလုံး ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့ပြီး ဇွဲမလျော့စတမ်း ခုခံတွန်းလှန်နေခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ သူရသတ္တိကတော့ ကမ္ဘာကပင် လေးစား အသိအမှတ် ပြုခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်း အကြမ်းဖက် အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီကို လုံးဝ အသိအမှတ်မပြုဘဲ လိုအပ်တဲ့ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများပြုလုပ်ဖို့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ရုန်းကန်မှုကပဲ အဓိက တွန်းအားပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ဦးကျော်မိုးထွန်း ဆက်လက် တည်ရှိနေခြင်းဟာ နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အောင်ပွဲဖြစ်ပါ တယ်။ CRPH, NUCCနဲ့ NUG တို့အပေါ် တရားဝင် ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြု အဖွဲ့အစည်းတွေအဖြစ် နိုင်ငံတကာရဲ့ နားလည်မှု၊ အသိအမှတ်ပြုမှုများ တိုးတက်ရရှိနေသလို ဒီအဖွဲ့အစည်းသုံးခုကို ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးရဲ့ ပဲ့ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ဖို့ မြန်မာပြည်သူတွေ မျှော်လင့်ချက်ထားရှိကြ တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်း နားလည်ပါတယ်။ ပြည်သူ့မျှော်လင့်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်း နိုင်ဖို့ ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှ အစွမ်းကုန် ကြိုုးစားအားထုတ်သွားပါ့မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလည်း ဒီနေ့ ဒီရက်မှာ ကတိပြုလိုပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင် အတွေးအခေါ် ကြီးစိုးပြီး ပြည်သူကို ရန်ပြု အကြမ်းဖက်နေတဲ့ စစ်တပ်ကို ဖျက်သိမ်းပစ်ဖို့နဲ့ ပြည်သူကို အမှန်တကယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီး ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ် အပေါ် ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့ တပ်မတော်သစ်တစ်ရပ် တည်ထောင်ဖို့ဆိုတာလည်း သမိုင်းရဲ့ တောင်းဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့တော်လှန်မှု တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း “ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်မတော်” PDFကို ဖွဲ့စည်းထူထောင်နိုင်ခြင်းဟာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ စွမ်းဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဟာ တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ (EAOs) များနဲ့ လက်တွဲပြီး စုဖွဲ့မှု၊ ဗဟိုအမိန့်ပေးကွပ်ကဲမှုစနစ် တည်ဆောက်မှု၊ စစ်မဟာဗျူဟာ ညှိနှိုင်းရေးဆွဲမှုနဲ့ စုပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်မှုများ တိုးတက်အားကောင်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် တော်လှန်ရေးခရီး မဝေးတော့ဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အနာဂတ်တပ်မတော်သစ် ထူထောင်ဖို့အတွက် ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလှုံလာမည့် တပ်မတော်သားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း ဆက်လက်ကြိုဆိုနေမြဲဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကိုချစ်သော တပ်မတော်သားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အနေဖြင့် ပြည်သူများနှင့် အမြန်ဆုံးပူးပေါင်းလာကြဖို့ ထပ်မံ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ် မှတ်တမ်းများအရ စက်တင်ဘာ (၇) ရက်နေ့မှ ဇန်နဝါရီ (၆) ရက်၊ ၄ လတာ အတွင်း အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအင်အား (၇၀၁၆) ဦး ထိခိုက်ကျဆုံး ပြုန်းတီးစေခဲ့တာ ဟာလည်း တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ PDF နဲ့ မဟာမိတ် EAOs များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဟာ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ရှေ့ပြေး စီမံဆောင်ရွက်မှုများ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေ စိုးမိုးထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးဖြစ်တဲ့ ဒေသတွေမှာ ကြားကာလ ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာတည်ဆောက်မှုကိုလည်း ဆက်တိုက် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဥ်နဲ့တွဲပြီး ကြားကာလ ပြည်သူ့တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင် ထူထောင်ဖို့လည်း တစ်ပြိုင်တည်း စီမံဆောင်ရွက်နေပြီဆိုတာ အသိပေးလိုပါတယ်။ အခုအချိန်အထိ စစ်အုပ်စု လက်အောက်ခံ ဖြစ်နေသေးတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့ ပတ်သက်ရင် စစ်ကောင်စီကျူးလွန်နေတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေမှာ ကြံရာပါ မဖြစ်လိုရင် ပြည်သူနဲ့ အမြန်ဆုံးပူးပေါင်းဖို့ လိုပါတယ်။ စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ရာမှာ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကတော့ နိုင်ငံတကာတရားစီရင်ရေးစနစ်အရကော၊ ပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်အရပါ အရေးယူအပြစ် ပေးခံရလိမ့်မယ်ဆိုတာ သတိပေးလိုပါတယ်။ ဒီတော်လှန်ရေးက စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို မြန်မာ့မြေပေါ်က အပြီးတိုင် ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက် ချထားပြီး ဖြစ်ပါ တယ်။ စစ်အာရှင်စနစ်ဖယ်ရှားပြီးတဲ့အခါ ဘယ်လိုအနာဂတ်မျိုးကို ကျွန်တော်တို့ မျှော်မှန်းပါသလဲ၊ တိုင်းသူပြည်သားအားလုံး ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိတဲ့ နိုင်ငံတော်၊ တိုင်းရင်းသား အားလုံး တန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်တည်းဟူသော ဖက်ဒရယ်အခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝ ရရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စု၊ ခွဲခြားမှုကင်းတဲ့၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့၊ သဟဇာတဖြစ်တဲ့ လူအဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာဖို့ မျှော်မှန်းထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မွန်မြတ်သန့်စင်တဲ့ တော်လှန်ရေး ဖြစ်တယ် လို့ဆိုချင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံတော်သစ် (New Myanmar) ရဲ့ အာရုဏ်ဦးကို ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော်လှန်ရေးမှာ အသက်တွေ၊ ဘဝတွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ စွန့်လွှတ်ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူတစ်ယောက်စီတိုင်းကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက အလေးအမြတ်ပြုပါတယ်။ ဒီတော်လှန်ရေးဟာ ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပါဝင်တဲ့ ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးလည်းဖြစ်တဲ့ အတွက် Generation – Z လူငယ်တွေ၊ PDF ရဲဘော်တွေ၊ CDM ဝန်ထမ်းတွေ၊ သပိတ်အင်အားစု တွေ၊ တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ (EAOs)တွေ တက်ညီလက်ညီ လက်တွဲဆင်နွှဲကြမယ်ဆိုရင် အပြီးသတ် ပြည်သူ့အောင်ပွဲ အရယူဖို့ အချိန်များစွာ မလိုတော့ဘူးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ တို့ပြည်သူ များ ရည်မျှော်တဲ့ အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်သစ် (New Myanmar)ကို ပုံဖော်ထုဆစ်မယ်သူ ဟာလည်း မြန်မာပြည်သူများ ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသောကာလမှာ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့ ညီညွတ်မှု စွမ်းပကားကြောင့် စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုသစ်ဟာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ပေါ်ထွန်းလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယဥ်ကျေးတဲ့ ကမ္ဘာကြီးအနေနဲ့လည်း မြန်မာပြည်က အရိုင်းအစိုင်းတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ အရေးမှာ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူတကွ ဆက်လက်ရပ်တည်ပေးကြပါ။ တော်လှန်ရေးအင်အားစု တွေအနေနဲ့ အဖက်ဖက်က ပြိုဆင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ စစ်အုပ်စုကို အနားမပေးစတမ်း ဆက်လက်တိုက်ပွဲ ဝင်ကြပါ။ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအနေနဲ့လည်း မြန်မာနိုင်ငံတော်သစ် (New Myanmar) တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မှာ နိုင်ရာကဏ္ဍက ဆက်လက်ထောက်ခံပါဝင်ပေးကြ ပါလို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ ပြည်သူ့တော်လှန်ရေး မုချအောင်ရမည်။ဒူဝါလရှီးလ ယာယီသမ္မတအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့
လေးစားအပ်တဲ့ပြည်သူ့ညီလာခံသဘာပတိကြီးများ၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ယာယီသမ္မတကြီး၊ တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အတိုင်ပင်ခံ ကောင်စီဝင်များ၊ ပြည်သူ့ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်တော်များ၊ အထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များနှင့် လေ့လာသူများအားလုံး မဂ်လာပါလို့ ရှေးဦးစွာ နုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ပြည်သူ့ညီလာခံဟာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ခေတ်သစ်နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာ အလွန် ထူးခြားလေးနက်ပြီး အရေးကြီးတဲ့ညီလာခံတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်ကိုဖြုတ်ချပြီး ပြည်သူ့ဘဝလွတ် မြောက်ရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် နွေဦးတော်လှန်ရေး ပြည်သူ့ အင်အားစုများ၊ တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မိတ်ဖက်နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ပြည်နယ်/ ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီများ လက်တွဲချိတ်ဆက်ပြီး ယခုလို ကျင်းပနိုင်ခြင်းအတွက် မိမိအနေဖြင့် များစွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်။ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ တော်လှန်ရေးကာလဖြစ်သော်လည်း တက်ရောက်ပါဝင်သင့် ပါဝင်လိုကြတဲ့အဖွဲ့အစည်း တွေ၊ အစုအဖွဲ့တွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ များစွာကျန်ရှိနေအုန်းမှာဖြစ်ပေမယ့်၊ တတ်နိုင်သမျှ ပါဝင်သင့် ပါဝင်နိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အစုအဖွဲ့တွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ တက်ရောက်ပါဝင်နိုင်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးခြင်း အတွက်လည်း မိမိအနေဖြင့် ဂုဏ်ပြုပါကြောင်းအလေးအနက်ဖော်ပြလိုပါတယ်။ လေးစားအပ်တဲ့ သဘာပတိများ၊ ယာယီသမ္မတကြီးနှင့် ခေါင်းဆောင်များခင်ဗျား - ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှာ တပ်မတော်ဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ဆန္ဒသဘောထားနှင့် ဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးချယ်မှုကို ဆန့်ကျင်ပြီး၊ နိုင်ငံတော်အာဏာကို အတင်းအဓမ္မ ထပ်မံလုယူသိမ်းပိုက်လိုက် ပြန်ပါတယ်။ ဒီလိုပြုမူဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းဟာ စတင်ဖြစ်တည်ထွန်းသစ်စ ဖက်ဒရယ်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးတို့အပြင် စီးပွားရေးနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းနှင့်မြော်လင့်ချက်များကို ရိုက်ချိုး ဖျက်ဆီးပစ်ရာရောက်စေခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတူ စစ်တပ်ကြီးစိုးတဲ့နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ယန္တရားများ ပြန်လည်အားကောင်းပြီး၊ တရားမျှတမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးတို့ကို လျစ်လျူရှု မျက်ကွယ်ပြုတဲ့စနစ်ဆိုးကို ပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။တပ်မတော်ရဲ့ တရားမဲ့ပြုမူဆောင်ရွက်မှုကို လက်မခံငြင်းဆန်ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဟာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ နိုင်ငံတဝှမ်းလုံးမှာ လမ်းပေါ်ကိုထွက်၊ ငြိမ်းချမ်းစွာကန့်ကွက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာသာမက ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာပါ တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းတာကို လက်မခံကြောင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသူအရေအတွက်ဟာ ရာဂဏန်း၊ ထောင်ဂဏန်း မဟုတ်ပါဘူး။ နေ့စဥ် သောင်းဂဏန်း၊ သိန်းဂဏန်းနှင့် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Generation Z လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေက ဦးဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ “စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခြင်း အလိုမရှိ”၊ “ပြည်သူ့အာဏာ ပြည်သူ့ပြန်ပေး”၊ “ဖမ်းဆီးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်များ ချက်ချင်းလွှတ်”၊ “လူငယ်တွေမှာ အနာဂတ်ရှိတယ်” အစရှိသည်ဖြင့် ရဲရင့်ပြတ်သားတဲ့ကြွေးကြော်မှုများနှင့် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအပါအဝင်ပြည်သူတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတဲ့သက်သေဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာသာမက ကမ္ဘာ့အလယ်မှာပါ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ ကတော့ ယဥ်ကျေးတဲ့ပြည်သူများရဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကန့်ကွက်မှုကို လျစ်လျုရှုပြီး၊ လူမဆန်တဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုမျိုးစုံနှင့် လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကို ရိုက်နှက်၊ ဖမ်းဆီး၊ သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ လေးစားအပ်တဲ့ သဘာပတိများ၊ ယာယီသမ္မတကြီးနှင့် ခေါင်းဆောင်များခင်ဗျား - လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း စစ်အာဏာသိမ်းမှုကာလ (၁၂) လပြည့်မြောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ (၁၂) လတာကာလအတွင်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာ နိုင်ငံတဝှမ်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကန့်ကွက်ကြတဲ့ လူငယ်တွေနှင့် ပြည်သူတွေကို သာလွန်အင်အားတွေနဲ့ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းပြီး သူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားသွားစေဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် လူငယ်တွေနှင့်ပြည်သူတွေရဲ့တရားမျှတမှုကို ချစ်မြတ်နိုး တဲ့စိတ်၊ လူ့အခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးထားပြီး လွတ်မြောက်လိုစိတ်တို့အပြင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်လိုတဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုတို့ကို ဘယ်လိုမှ နှိပ်ကွပ်ချိုးဖျက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာ ယခုအခါ စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ မျက်ဝါးထင်ထင် သိမြင်ကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ ယခုအချိန်အထိ လူငယ်တွေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ လိုလားမှုကို မသိကျိုးကျွံပြုလျစ်လျုရှုနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို မဆီမဆိုင်လုယူထားပြီး၊ သူတို့ကပဲ နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက် စေတနာစိတ်နှင့် အလုပ်လုပ်နေသလိုလို အသံကောင်း ဟစ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာသာမက နိုင်ငံတကာမှာပါ သူတို့ကို လက်မခံ၊ အသိအမှတ်မပြုနေတော့ တာကို သိပင်သိငြားသော်လည်း၊ ပုလင်းတူဗူးဆို့နိုင်ငံအချို့ရဲ့ အကူအညီနှင့် ပြည်သူတွေကို ရက်စက်စွာပြုမူဖို့ ဆက်လက်ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်နေတာဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့သာမက၊ နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူ တွေကိုပါ အဆိုးဆုံးအခြေအနေသို့တွန်းပို့နေတယ်ဆိုတာ အတိအလင်းပြောကြားလိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ ပြည်နယ်၊ ပြည်မနေရာဒေသအသီးသီးမှာ သာလွန်အင်အားတွေနဲ့ ပြည်သူတွေကိုထိုးစစ် ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လိုပါတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ အပါအဝင် မတရားဖမ်းဆီးအကျဥ်းချထားတဲ့ ပြည်သူတစ်သောင်းကျော်ကို ခြွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ် ပေးဖို့လိုပါတယ်။ မိမိတို့နှင့်အလျဥ်းသက်ဆိုင်ခြင်း မရှိတဲ့ နိုင်ငံတော်အာဏာကို ချက်ချင်းစွန့်လွှတ်ပြီး အချုပ် အခြာအာဏာရဲ့မူလပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူထံ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် လွှဲအပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတစ်ရပ်လုံးရဲ့ နည်းမျိုးစုံဖြင့် တိုက်ခိုက်ဖြိုချမှုကို ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရမှာဖြစ်ကြောင်း သတိပေးလိုပါတယ်။လေးစားအပ်တဲ့ သဘာပတိများ၊ ယာယီသမ္မတကြီးနှင့် ခေါင်းဆောင်များခင်ဗျား - လက်ရှိ နွေဦးတော်လှန်ရေးဟာ ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ဖွဲ့၊ လူတစ်စုရဲ့ အကျိုးစီးပွားကိုရယူ ဖို့ဆင်နွဲနေတဲ့တော်လှန်ရေး မဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ်စု၊ လူတစ်ဖွဲ့က စေခိုင်းကြီးကြပ်တဲ့တော်လှန်ရေးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက် ပြည်သူများကိုယ်တိုင် ဦးဆောင် ပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ နွေဦးတော်လှန်ရေးဟာ “ဓမ္မ” ကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး “အဓမ္မ” ကိုငြင်းပယ်တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ရင်ထဲ အသည်းထဲကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်မှုကနေ စီးဆင်းလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယခု ပြည်သူတွေဆင်နွဲနေတဲ့တော်လှန်ရေးဟာ မုချမသွေအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူ့ကျင့်ဝတ်ကင်းမဲ့ပြီး ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်ရတာဖြစ်လို့ ခက်ခဲကြမ်း တမ်းမှုများ၊ ကြေမွထိခိုက်ရမှုများ၊ စိတ်မသာညီးတွားရမှုများ မလွဲမသွေရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း စနစ်ဆိုးကို ခြေမွပြီး၊ စနစ်သစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ကြရတာဖြစ်လို့ နာကျင်ရပေမယ့် ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့ တစ်နေ့ မိမိတို့အားလုံး “သားဖွားတဲ့မိခင်ရဲ့ ပီတိ” လိုမျိုး ဂုဏ်ယူကျေနပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ပဲ၊ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာ ခုခံတော်လှန်မှုပြုနေကြတဲ့ ပြည်သူ့ဘက်တော်သား တော်လှန်ရေးအင်အားစုများအနေ ဖြင့် “အဆိုးအားဖြင့် အရှုံးဘက်ကို မယိမ်းယိုင်သွားစေဘဲ၊ အကောင်းအားဖြင့် အဆိုးအညစ်များကို အနိုင်ယူဖို့” မိမိအနေနဲ့ ကြုံကြိုက်တုန်း တိုက်တွန်းနိုးဆော်လိုပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလ ယနေ့အထိ မဆုတ်မနစ်သော စိတ်ပိုင်းဖြတ်ကြံ့ခိုင်မှုများဖြင့် အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းများသာမက၊ ငွေကြေးမှအစ အဘက်ဘက်မှ မနားမနေ ပံ့ပိုးကူညီတာဝန်ယူပေး ကြတဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက မြန်မာပြည်သူပြည်သားများကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ဖော်ပြလို ပါတယ်။ (၁၂) တာကာလအတွင်း ပြည်သူတွေရရှိတဲ့အောင်မြင်မှုများဟာ နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မြန်မာပြည်သူတွေကိုချစ်ခင်တန်ဖိုးထားကြတဲ့ မိတ်ဆွေများရဲ့ကရုပြုမှုနှင့် အတူတကွရပ်တည်ပေးမှုများကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လေးစားအပ်တဲ့ သဘာပတိများ၊ ယာယီသမ္မတကြီးနှင့် ခေါင်းဆောင်များခင်ဗျား - မိမိတို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတိတ်နိုင်ငံရေးသမိုင်းအတွေ့ အကြုံနှင့်သင်ခန်းစာများအပေါ်အခြေခံပြီး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအားလုံးမြော်မှန်းတဲ့ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတစ်ခုကို တည်ထောင်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုတည်ထောင်တဲ့နေရာမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး များအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့ပုံစံနှင့်သဏ္ဍာန်ထဲကနေ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းနိုင်ခြင်း အပြည့် အဝရှိပြီး၊ လူမျိုးတစ်ခုခု၊ အစုအဖွဲ့တစ်ခုခုရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုကင်းလွတ်ခြင်းရှိတဲ့ လွတ်လပ်မှု၊ တန်းတူမျှတမှု၊ ကြီးနိုင် ငယ်ညှင်းကင်းရှင်းမှုတို့နှင့်ပြည့်စုံတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ကို ထူထောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိနွေဦးတော်လှန်ရေးကာလမှာ နိုင်ငံရေးအရ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီမှာ “ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီပဋိဉာဉ်”ရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပါအဝင် ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေ ကြားမှာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးအရ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ ယခုပြုလုပ်မယ့် ပြည်သူ့ညီလာခံမှာ ပြန်လည်ညှိနှိုင်းပြုပြင်ထားတဲ့ “ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိဉာဉ်” အတည်ပြုခြင်းအပါအဝင် နွေဦးတော်လှန်ရေးအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက် အချက်အခြာကျတဲ့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ကြပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း စစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ ရက်တစ်ရက်တိုးလေလေ၊ ပြည်သူတွေခံရတဲ့ ဒုက္ခဆင်းရဲကြပ် တည်းမှုတွေကလည်း တစ်ရက်ပိုလေလေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်သူတွေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်လုံခြုံဖို့ အတွက် စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို အမြန်ဆုံးဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ “ပြည်သူ့ဒုက္ခ အမြန်ဆုံးလွန်မြောက်နိုင်ရေး” ကိုမျက်ခြေ မပြတ် ရှေးရှူဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လေးစားအပ်တဲ့ သဘာပတိများ၊ ယာယီသမ္မတကြီးနှင့် ခေါင်းဆောင်များခင်ဗျား - ယနေ့မှစတင်ပြီး ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ့် “ပြည်သူ့ညီလာခံကြီး” ရည်မှန်းချက်အတိုင်း အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင် ပါစေ။ ပါဝင်တက်ရောက်ကြသူကိုယ်စားလှယ်များ၊ စိတ်အားထက်သန်မှုများစွာဖြင့် လေ့လာသူများ၊ ညီလာခံ ကျင်းပရေးတာဝန်ရှိသူများ၊ အလုပ်အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ရှိကြပါစေ။ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံ သားအပေါင်း ဘေးလွတ်လုံခြုံ၍ တရားမျှတမှုနှင့် လွတ်လပ်ခြင်းများ အမြန်ဆုံးရရှိခံစားနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း လေးစားစွာ နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး[email protected] ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလ၏ ပြည်သူ့ညီလာခံ ဖွင့်ပွဲအမှာစကား ချစ်ခင်လေးစားရပါသော ပြည်သူ့ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ လေ့လာသူများ၊ ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ၊ သံတမန်များကို ရှေးဦးစွာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာကြပါစေ၊ လိုအင်ဆန္ဒ အဝဝ ပြည့်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ညီလာခံကြီးကို အခုလို ကျင်းပနိုင်တာဟာ နွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ အရေးကြီးလှတဲ့ အလှည့်အပြောင်း အချိုးအကွေ့ဖြစ်ပြီး သမိုင်းမှာလည်း မော်ကွန်းဝင်ကျန်ရစ်မယ့် အစည်းအဝေး ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလို မိန့်ခွန်းပြောခွင့်ရတာ အလွန်ပဲ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ဒီပြည်သူ့ ညီလာခံကြီးဟာ အကြမ်းဖက် စစ်အုပ်စုရဲ့ တိုင်းပြည်အာဏာကို လက်နက်အားကိုး မတရားသိမ်းယူဖို့ ကြိုးစားတဲ့ တစ်နှစ် ပြည့်လုဆဲဆဲ ကာလနဲ့ သွားရောက် တိုက်ဆိုင်နေတာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အုပ်စုက ဘယ်လောက်ပဲ တိုင်းပြည်ကို အကြမ်းဖက် အာဏာရယူဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့ ပြည်သူလူထုက လက်မခံပဲ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆန့်ကျင်တွန်းလှန် နေတယ်ဆိုတဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခုအဖြစ် ဒီပြည်သူ့ညီလာခံကြီးကို ကျင်းပနိုင်တဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးအနှစ်သာရ အားဖြင့် အလွန် အရေးကြီးလှပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့ အဓိကအရင်းခံ ရေသောက်မြစ် ပြဿနာတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေကို ဖြေရှင်းနိုင် မယ့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီး တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် အရေးကြီးလှတဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိဉာဉ်ကြီးကို ဒီညီလာခံမှာ အတည်ပြုပြီး သမိုင်းမှတ်တိုင်စိုက်ထူနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင် စနစ်အပါအဝင် အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှ ပပျောက်ရေး၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အပြီးသတ် ဖျက်သိမ်းရေး၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး၊ အရပ်သား ပြည်သူ့အစိုးရ ပေါ်ထွန်းရေးအစရှိတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ အတည်ပြုပြဌာန်းမယ့် ပဋိဉာဉ် ကြီးက နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ မီးရှုးတန်ဆောင်ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပဋိဉာဉ်ကြီးမှာ ပါတဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံအတိုင်း ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေတစ်ရပ်ကို လူထုဆန္ဒနဲ့အညီ အတည်ပြုပြဌာန်းပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစနစ် (Constitutionalism)ကို လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်မှသာ ကျွန်တော်တို့မျှော်ရည်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင် စုကြီးတည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ပဋိညာဉ်မှာ ပါဝင်တဲ့ အစုအဖွဲ့များ ဖြစ်တဲ့ ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကြားကာလ ပြည်နယ်နဲ့ ဖက်ဒရယ်ယူနစ် ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်း များ၊ သမဂ္ဂများ၊ အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နဲ့ လူနည်းစုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင် အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ၊ အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေး CDM လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုသပိတ် လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ စုပေါင်းညီညွတ်မှု၊ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုနဲ့ ဟန်ချက် ညီညီ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုက အလွန်အရေးကြီးလှပါတယ်။ အဲဒီလို အားထုတ်ကြဖို့ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ/ ကော်မရှင်တွေ ဖွဲ့စည်းပြီး ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အတွက်လည်း များစွာ ဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ အာဏာရှင်စနစ်ပပျောက်ရေး၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေး၊ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် ဒီပဋိဉာဉ်နဲ့အညီ ရေးဆွဲထားတဲ့ မဟာဗျူဟာ တွေကိုလည်း အကောင်းဆုံး လေ့လာသုံးသပ်ပြီး အတည်ပြုပေးနိုင်ပြီး ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်ရေး ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း တင်ပြအတည်ပြုချက် ရယူနိုင် မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လည်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အတိုင်ပင်ခံကောင်စီရဲ့ လမ်းညွှန်မှု၊ မူဝါဒဆိုင်ရာ ထိန်းကျောင်းမှုတွေကို ခံယူပြီး ဒီမဟာဗျူဟာတွေ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အားလုံးနဲ့ လက်တွဲပြီး အကောင်အထည်ဖေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရ အနေနဲ့ အစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးကတည်းက အခုအချိန်ထိ ပဋိဉာဉ်မှာ ပါတဲ့ ပြဌာန်းချက် များနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ညီလာခံမှာ အစီရင်ခံ တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုညီလာခံကြီးကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက် အားထုတ်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသူတွေ၊ အထူးသဖြင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ နည်းပညာပံ့ပိုးကူညီကြသူတွေကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ဖေါ်ပြလိုပါတယ်။ ဒီညီလာခံကြီးကနေ အစပြုပြီး ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီပဋိဉာဉ်ကြီးနဲ့အညီ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီး တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ အားလုံး ဝိုင်းဝန်းလက်တွဲ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့ သန္နိဌာန်ပြုရင်း၊ ဒီညီလာခံကြီး အောင်မြင်စေ ကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။ အားလုံး စစ်ဘေးဒဏ်၊ သဘာဝဒဏ်များမှ ကင်းလွတ်ပြီး၊ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုများ ခံစား ရရှိပါစေ၊ ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောတဲ့၊ တရားမျှတတဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်တခုကိုလည်း ခံစားရရှိပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရေးတော်ပုံ မုချအောင်ရမည်။(ယာယီသမ္မတ)အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလက ပြောကြားသော ၇၄ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ မိန့်ခွန်း
04 January 2022 မိန့်ခွန်းများ
Respected citizens and people of Myanmar, I am greatly honored to deliveraspeech to you all, the citizens, ethnic nationalities, and the people, on this occasion of the 74th anniversary of Independence Day of the Union of Myanmar. Although it has been 70 years since we were free from colonial rule, it is sad that we are still under the slavery of military dictatorships and harshly suffering their violence and suppression. Although the state could retain its sovereignty, the freedom of the people, the owner of that sovereignty, has been lost under consecutive coups and we are still struggling for it. The visions and values of the architects of Independence have truly been reflected in the Independence declaration. Article5of the declaration clearly states, "The New Republic of Burma is also established upon the principle of Burmese unity, not by blood, tribe, or faith, but byaunity that speaks with one voice, representing many." However, the Myanmar military has outrightly violated the principles and values of the Independence Declaration, and they hold the country as their hostage as if it is their own and are taking advantage of it; thereby, enslaving the country. As long as the owners of the sovereignty of the country lose their rights, we cannot say the country has achieved its independence. In the last 60 years, the military has stagedacoup four times and has revealed their true colors of fascism. The attempted coup on February 1, 2021, was the ugliest incident in history. All Myanmar people and the international community have seen that the military is using several inhumane ways to repress, torture, kill and commit crimes against the people. This terrorist military no longer deserves to be called the Army as they degraded themselves into the enemy of the people and terrorists. For now, the people have only one choice. That is to launchadefensive war,awar that all people can take part in different ways, against the military to completely remove the military dictatorship. We can call itastruggle for the second independence. On last new year's days, I sawapiece of news in which the terrorist military leader said, "This year, we are going startanew step of the peace process and we invite all stakeholders to dialogue for peace." An attempted coup has trampled hopes of peace. They have destroyed peace and the future of the country. The reason they are releasing such news while they are facing defeats in all areas - in politics, military, and defeats - is no other reason except than to find their political exit, to dither, to deceive the international community, and to confuse the resistance forces. They are also deceiving people by saying that they are going to host an election in 2023. The election held by the military group will not reflect the will of the people, but it also will not beafree and fair election. Trusting this deceitful military will result in dithering the people's revolution processes. In fact, the war criminals who are stained with the people's blood should not be sent to political dialogues. They should be sent to domestic and international criminal courts. The National Unity Government will always welcome the military personnel who detests the military's atrocities, who believe that their responsibility is to protect the country, not to be involved in politics, even though you may still be under the terrorist leadership at the moment. In the National Unity Consultative Council,aplatform where all the political forces who want genuine federal and democracy gather together, we have confirmed the Federal Democratic Charter that includesapolitical road map for the future of the Union of Myanmar. The National Unity Government will follow this charter and continually move forward and implement it as in the road map. The most important thing at the moment is, based on the objectives of ending the military dictatorship and buildingafederal democratic union, all political forces including the EAOs, should build unity and get involved in people's revolution. The revolution that has sacrificed many lives in the last 11 months will seeanew change in 2022 and, have no doubt, we will achieve the people'svictory. As in the Declaration of the Independence which states, "The Burmese people, have here madeasolemn declaration of Burmese Independence and of the principles upon which the New Republic of Burma is founded and will be governed", I would like to urge you to let us tenaciously work together until we free ourselves from military slavery and bring back freedom, equality, and justice for the people who are the original owner of the sovereignty. Our cause shall triumph!January 4, 2022
ကပ်ရောဂါ၊ အာဏာသိမ်းမှုတို့နှင့် ယှဥ်တွဲနေထိုင်ခြင်း
20 July 2021 မိန့်ခွန်းများ
မြန်မာနိုင်ငံအရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ- ၂၀၂၁ ဩစတေးလျအမျိုးသားတက္ကသိုလ် ကပ်ရောဂါ၊ အာဏာသိမ်းမှုတို့နှင့် ယှဥ်တွဲနေထိုင်ခြင်း ဒေါက်တာလျန်းမှုန်းဆာခေါင်းပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း (၁၆-၇-၂၀၂၁) ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ယခုလိုအရေးပါလှတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်မိန့်ခွန်း ပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာ ဩစတေးလျနိုင်ငံရောက် မြန်မာ့အရေးစိတ်ပါဝင်စားသူများက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲ လျက်ရှိတဲ့သတင်းနဲ့ ပြည်တွင်းအခြေအနေများကိုဆွေးနွေးရာမှာ အရေးပါလှတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို ဩစတေးလျအမျိုးသားတက္ကသိုလ် (ANU) က နိုင်ငံတွင်း သုတေသီများအား အထောက်အကူပြုစေရန် စီစဉ်ပြီး သုတေသီများကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းများထံသို့ ၎င်းတို့ရဲ့ သုတေသနတွေ့ရှိချက်များအား ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမျှဝေ နိုင်တဲ့ ဖိုရမ်တခုဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သိရှိထားပါတယ်။ ယနေ့ ဒီဖိုရမ်ကို တက်ရောက်လာသူ များအနေနဲ့ ယခင်ကလိုမဟုတ်ဘဲ မြန်မာပြည်တွင်းအခြေအနေ/ပြဿနာများကို လွတ်လွတ် လပ်လပ် ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးအဖြေရှာကြတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲပြီး ပြုလုပ်သွားနိုင် မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အားလုံးသိရှိကြတဲ့အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၁-၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ နေ့ကစလို့ ဖိနှိပ်အကြမ်းဖက်မှုပြုများဖြင့် အကြမ်းဖက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့စစ်တပ်နဲ့ ပြည်သူလူထု အကြား ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ စစ်သလင်းသဖွယ်ပြန်လည်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလို စစ်တပ် အာဏာသိမ်းယူခဲ့မှုဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်ကာစ ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဖျက်ဆီးလိုက်ရုံမျှမက ဒေသတွင်းမတည်ငြိမ်မှု၊ လူသားမျိုးနွယ် လုံခြုံမှု၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အခွင့်အ‌ရေးကာကွယ်မှုစတဲ့ နယ်ပယ် တွေမှာ ဆိုးရွားတဲ့ ဒေသတွင်းရိုက်ခတ်မှုများစွာကိုပါ ဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး သိကြတဲ့အတိုင်း မင်းအောင်လှိုင်ဟာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေဆဲအချိန်မှာ ဒီလို အာဏာသိမ်းမှုကို ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက် တိုင်းပြည်မှာ စိန်ခေါ်မှုကြီးတရပ်ဖြစ်စေခဲ့ပြီး အာဏာ သိမ်းမှုဟာ ကျွန်တော်တို့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာများကို ဆတိုးပွားများစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကပ်ရောဂါနှင့် အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားနေဆဲကာလ ဖြစ်သဖြင့် ကိုဗစ်ရောဂါနှင့် မင်းအောင်လှိုင် စတဲ့ စစ်ပွဲ ၂ ခုနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေရပါတယ်။ ကပ်ရောဂါနဲ့ အာဏာသိမ်းမှု ၂ ခုလုံးဟာ တိုင်းပြည်အတွက် ဆိုးရွှားလှတဲ့ ဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်ကြပြီး ကိုဗစ် တတိယလှိုင်းဖြစ်ပွားမှုကြောင့် တစ်ရက်လျှင် အနည်းဆုံး လူပေါင်း ၅,၀၀၀ ခန့် ရောဂါကူးစက်ခံနေရပြီး တစ်နေ့တာအတွင်း ကပ်ရောဂါကြောင့် လူသေဆုံးမှုမှာလည်း အနည်းဆုံး ၁၀၀ ခန့်ရှိပါတယ်။ ဒီညွှန်းကိန်းတွေဟာ စစ်ကောင်စီက ဖော်ပြတဲ့ ပမာဏသာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့၏ ခန့်မှန်းချက်များအရ တစ်ရက်လျှင်ကူးစက်မှုနှုန်း ၂၀,၀၀၀ ခန့်နဲ့ သေဆုံးသူ ၄၀၀ ခန့် ရှိနိုင် ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်တွင် မင်းအောင်လှိုင်သည် လူပေါင်း ၉၁၁ ကျော်အား သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၆,၆၉၄ ခန့်အား အကျဉ်းချထားကာ လူပေါင်း ၁,၉၆၃ ကို ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ထားပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှု တိုးမြှင့်လာသည်နှင့်အမျှ လူ‌ထောင်ပေါင်းများစွာတို့သည်လည်း ၎င်းတို့၏ အသက်‌ရှင်သန်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ၎င်းတို့၏နေရပ်များကိုစွန့်ခွာ၍ တောတောင်ထဲရှိ စခန်းများတွင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရပါတယ်။ စစ်အာဏာမသိမ်းမီကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူမှာ သန်းဝက်ခန့်ရှိပြီး စစ်အာဏာပြီးနောက် လူပေါင်း ၂ သိန်းနီးပါး ထပ်မံ တိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအခြေအနေတွေကြောင့် မြန်မာပြည်ရှိ လူပေါင်း ၆.၆ သန်းခန့်ဟာ စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြော ကြားချက်များရှိပါတယ်။ ဒါတွေသည်ပင်လျှင် ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ မြန်မာပြည်တွင်းအခြေအနေ များကို ထင်ထင်ရှားရှား ဖော်ကျူးပြနေပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်များက ပြည်သူလူထုအပေါ်ကျူးလွန်လျက်ရှိတဲ့ မတရားမှုများကို စိန်ခေါ် ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကနေ ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ လွှတ်တော်အမတ်များဖြင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw-CRPH) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ CRPH သည် အကြမ်းမဖက်အာဏာရှင်ဖီဆန်ဆန့်ကျင်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်ကြသော အရပ်ဘက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ များနှင့် ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်အမတ်များ စသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်၍ အမျိုးသားညွီညွတ်ရေးအစိုးရ (National Unity Government-NUG) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ CRPHနှင့် NUG တို့အပြင် ကျွန်တော်တို့ဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အား ဆန့်ကျင် သော တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ညီညွတ်စွာ ပါဝင်ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ကြတဲ့ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ (National Unity Consultative Council-NUCC) ကိုလည်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ စစ်အာဏာသိမ်းမှု တစ်ပြိုင်တည်း စုပေါင်း တော်လှန်မှုနှင့် ၎င်းတို့၏ ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေး တောင်းဆိုချက်များကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရန် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သာလျှင် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးရဲ့ ထောက်ခံအားပေးမှုဟာ NUG အစိုးရအတွက် အဖိုးအထိုက်တန်ဆုံး ပိုင်ဆိုင်မှုပြယုဂ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဟာ တရားဝင်အစိုးရ၊ တရားဝင်ကျင်းပသည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများက တိုင်းပြည်အား စီမံအုပ်ချုပ်ရန် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားတဲ့ တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်လို့ မှန်ကန်စွာ ထုတ်ပြောနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ဟာ တရားဝင်အစိုးရဖြစ်သဖြင့် ပြည်တွင်းတော်လှန်မှုများကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးပြီး ပြည်ပ နိုင်ငံတွေနဲ့ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတွက်ကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ တရားဝင်အစိုးရဖြစ်မှုကို ကာကွယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာသိမ်းမှုအား ထိရောက်စွာ တော်လှန်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုအားလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နိုင်ငံရေးပေါင်းစည်းရေး၊ နှင့် ပြည်သူလူထု၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းပေးရေးစသော ပေါင်းစည်းခိုင်မာတဲ့ လမ်းစဉ်အား အလေးထားထားရေးဆိုတဲ့ အချက်(၃)ချက်ကို လက်ကိုင်စွဲကာ ပြည်သူတွေ အတွက် မဆုစ်မနစ်သော ဇွဲလုံ့လနဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ထိရောက်သော တော်လှန်မှုဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ကျွန်တော်တို့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဖိအားများကို အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မတော်အပေါ် ပြည်တွင်းဖိအားများ ရှိစေရေး အတွက် တပ်မတော်အနေဖြင့် ပြည်တွင်းတည်ငြိမ်မှုကိုဖော်ဆောင်နိုင်ပြီဟု ကြေညာနိုင်ခြင်းမရှိ စေရန် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသမှုများနှင့် အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်သည့် လှုပ်ရှား မှုများ (CDM) ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကာ အရှိန်အဟုန်တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာမှာ (က) အရပ်သား ပြည်သူများအပေါ် ထိခိုက်မှုများမဖြစ်စေဘဲ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များက ဆောင်ရွက်သည့် စစ်ရေးဖိအား၊ (ခ) ပြည်သူလူထု၏ အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်းများအပေါ် ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေဘဲ တပ်မတော်၏ ယန္တရားကို ဆက်လက်ဟန့်တားခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးကဏ္ဍ အပေါ် ဖိအားပေးရေးနှင့်၊ (ဂ) တပ်မတော်ရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ပျက်ပြားစေပြီး မင်းအောင်လှိုင်၏ ဦးဆောင်မှုအမှားအနောက်မှလိုက်နေရသော အခြားစစ်ခေါင်းဆောင်များအား သွေးဆောင်စည်းရုံးကာ စစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တို့အား ပြိုကွဲစေရေးနှင့် တပ်မတော်၏ လုပ်ငန်းများအား တားဆီးပိတ်ပင်ရေးနှင့် ဆန္ဒဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရေး စသည်တို့အားဖြင့် နိုင်ငံရေးဖိအားများ စသည်တို့ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မတော်အပေါ် ပြည်ပဖိအားများသက်ရောက်ရေးအပိုင်းမှာ နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသတွင်းအစိုးရများအား ၎င်းတို့အနေဖြင့် စစ်အာဏာရှင်များအား ဖယ်ကျဉ်ပြီး အာဏာရှင် များ၏ အရင်းအမြစ်နှင့် ရန်ပုံငွေများကို ဖြတ်တောက်ကာ နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုအတွက် အရေးယူမှုများပြုရန် စည်းရုံးတိုက်တွန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တားမြစ်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်သည့် နည်းလမ်းများအပါအဝင် ICC နှင့် ICJ တို့တွင် တရားစွဲဆိုသည့်နည်းလမ်းများနှင့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတွင် တင်ပြတောင်းဆိုခြင်းစသဖြင့် သံတမန်မဟာဗျူဟာနည်းလမ်းများ ကိုလည်း အသုံးပြုသွားပါမယ်။ ထိုရည်မှန်းချက်များအား ဝိုင်းဝန်းဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက် ပေးကြဖို့ ပြည်ပရောက်မြန်မာများ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုများကိုလည်း ရယူသွားပါမယ်။ ထို့အပြင် ကျွန်တော်တို့သည် မိတ်ဆွေတို့နှင့် ကမ္ဘာ့တဝှမ်းရှိ ပြည်သူပြည်သားမိတ်ဆွေအပေါင်းရဲ့ ထောက်ခံအားပေးမှုကိုလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ၎င်း၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အများဆုံး လုပ်ဖို့လိုတာက ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သမိုင်းကြောင်းမှာ နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာစွာဖြစတည်ခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်း ပဋိပက္ခနဲ့ စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုတွေကိုအခြေခံပြီး ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ၏ ညီညွတ်မှုကို စနစ် တကျ ခိုင်ခိုင်မာမာ တည်ဆောက်မြှင့်တင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ တပ်မတော်ဟာ နည်းလမ်းဟောင်း တခုဖြစ်တဲ့ သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ခြင်း မူဝါဒကို တဖန်ပြန်လည်အသုံးပြုနေကြောင်းနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဗမာလူမျိုးအုပ်စုများအပါအဝင် တိုင်းရင်းသား ပါတီများကို ပြိုကွဲစေဖို့ ကြိုးပမ်းနေကြောင်း ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကောင်းစွာ သိရှိထားကြ ပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့ အားသွန်ခွန်စိုက်တောင့်ခံတွန်လှန်းရပါမယ်။ ဒါကြောင့်သာလျှင် ကျွန်တော်တို့က အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအကြံပေးကောင်စီ (NUCC) လို့ ခေါ်တဲ့ အားလုံးပါဝင်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ NUCC မှာ အကြမ်းမဖက်အာဏာရှင်ဖီဆန်ဆန့်ကျင်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်ကြသော အရပ်ဘက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော်အမတ်များစသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်နေ ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ NUCC အနေဖြင့် ဒီမိုကရက်တစ်ညွှန်ပေါင်းအဖွဲ့အတွင်းရှိ အဖွဲ့ငယ် အသီးသီးကြား၌ ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နိုင်ဖို့ လုံခြုံစိတ်ချရပြီး အပြုသ‌ဘောဆောင်တဲ့ ရပ်ဝန်းတစ်ရပ်ကိုလည်း ဖန်တီးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတစ်ဦးအနေဖြင့် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားအားလုံးအတွက် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်း စဉ်အသစ်ကို တညီတညွှတ်တည်းစုပေါင်းပါဝင်သော အင်အားစုတစ်ရပ်အဖြစ် အသုံးချသင့်တယ် လို့ ကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မတူညီသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၊ ဘာသာရေးအုပ်စုများနှင့် လူနည်းစုလူမျိုးများစသဖြင့် မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံး၏ ထင်မြင်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ထင်ဟပ်စေနိုင်မည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို ရေးဆွဲအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် အားထုတ်ကြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ နိုင်ငံရေးတွင် အားလုံးပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဒီမိုကရေစီနဲ့အညီ အများဆန္ဒဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းစတဲ့ စနစ်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ အားလုံးပါဝင်မှု၊ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုစတဲ့ အင်္ဂါရပ်များနှင့်ပြည့်စုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးအနာဂါတ်ကို အခိုင်အမာ အာမခံပေးနိုင်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသစ်တစ်ရပ်ကို ရေးဆွဲနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ကျွန်တော် အထူးပြောလိုတာက အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ သည် ပြည်သူများက ရွေးချယ်ထားပြီး ပြည်သူလူထု၏ (သို့) ပြည်သူ့အကျိုးထမ်းဆောင်တဲ့ အစိုးရတစ်ရပ်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ မြန်မာပြည်သူများအား ကာကွယ်ခြင်း၊ CDM လှုပ်ရှားမှု တည်မြဲ စေရန် အသက်အိုးအိမ်စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံ ပါဝင်ကြသူများအား ငွေကြေးဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ စစ်တပ်၏ လွဲမှားသောစီမံခန့်ခွဲမှုများကြောင့် ပြိုလဲကျနေသောကျန်းမာရေးစနစ်တွင် ပိုမိုဆိုးရွား လျက်ရှိသည့် ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဆိုးမှ ပြည်သူများကို ကယ်တင်ခြင်းနှင့် အကြမ်းဖက် စစ်တပ် ကြောင့် နေရပ်ရှောင်ခွာထွက်ပြေးနေရသည့် ပြည်သူများအား လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ ပေးအပ်ခြင်း စတာတွေကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် လည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပင်မ ဦးတည်ရာကတော့ မလိုအပ်တဲ့ ဗျူရိုကရေစီယန္တရားများ ဖန်တီးရန်မဟုတ်ဘဲ စစ်ကောင်စီပြုတ်ကျရေးသာဖြစ်ပါတယ်။ မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ၎င်း၏ အာဏာရှင်စနစ်ကို အမြန်ဆုံးဖြုတ်ချခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုက ပေးအပ်သည့် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ အရေးကြီးဆုံး လုပ်ငန်း ၂ ရပ်မှာ မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ၎င်း၏ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအား ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု တည်ထောင်ခြင်းတို့ပင်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားရင်း ကျွန်တော်ရဲ့မိန့်ခွန်းကို နိဂုံးချုပ်ပါရစေ။ ယခုလို ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမှာ လွတ်လပ်မှုကို ချစ်မြတ်နိုးကြပြီး လူသားဂုဏ်သိက္ခာကို လေးစားကြတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက မိတ်ဆွေများကလည်း ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ လက်တွဲညီညီ ပါဝင်ထောက်ခံအားပေးကြမယ်လို့ အထူးမျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။